I-Dongguan Qiaofeng Plastic Hardware Products Co, Ltd, esungulwe ngo-2008 Kusukela yasungulwa, inkampani ibigxile kwifenisha enkulu, ukukhanyisa, i-elekthronikhi, amathoyizi nezinye izimboni ukuhlinzeka ngemikhiqizo yepulasitiki nezinye izinsimbi.
Imikhiqizo yethu igxila kuzinsimbi zepulasitiki, izesekeli zehadiwe, ifenisha ye-Plastic Led Driver Enclosureaccessories, i-Anti-tip funiture, ihange lasendlini, izinyawo zokulinganisa eziguqukayo, isivikelo sekhoneni lepulasitiki, Isilawuli kude, iLampshade, ikhebula uthayi, ubakaki, Ifenisha / Ukukhanyisa / Ukuxhumeka kwe-elekthronikhi nokuqina izesekeli, njll Manje sikhonza amakhasimende emhlabeni wonke. Le nkampani inemishini eminingi yokukhiqiza umjovo othuthukile kanye nemishini yokukhiqiza isikhunta epulasitiki, enganikeza ngezinsizakalo ezihlanganisiwe zokwakhiwa kwesikhunta nokukhiqiza, ukubumba umjovo, ukucubungula kanye ne-assembly.We futhi samukela ukuhleleka nephakethe le-OEM / ODEM. sizokunikeza intengo engcono kakhulu nensizakalo.
Inkampani ikhuthaza umoya webhizinisi we "professional, practical, effective and innovative", inendlela enhle yangaphakathi, indawo yokusebenza enhle kakhulu kanye nendlela enhle yokukhuthaza, futhi iheha iqembu lamathalenta asezingeni eliphakeme, aphezulu futhi asebenzayo. izinhlelo zokuthengisa nezinethiwekhi zensizakalo ekhaya nakwamanye amazwe. Ngaphansi kwesisekelo se- "People-based, Survival by Quality, Development by Credit", inkampani yethu yenza inqubekela phambili njalo futhi ikunikeze nemikhiqizo nezinsizakalo ezihamba phambili nganoma yisiphi isikhathi.Inkampani yethu yamukela ngobuqotho amakhasimende asekhaya nakwamanye amazwe ngokuholwa nokuxoxisana ikusasa eliqhakazile!